१३ औं सागः ७ स्वर्णसहित नेपाललाई १० पदक, कसले कति पदक जिते ? - Everest Dainik - News from Nepal
१३ औं सागः ७ स्वर्णसहित नेपाललाई १० पदक, कसले कति पदक जिते ?
काठमाडौंः १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपालले अहिलेसम्म ७ स्वर्ण पदक जितेको छ ।
७ स्वर्ण, २ रजत र १ कास्यसहित १० पदक जितेको नेपाल शिर्ष स्थानमा छ ।
भारतले १ स्वर्ण, २ रजत र १ कास्यसहित ४, पाकिस्तानले १ स्वर्ण र २ रजतसहित ३ पदक जितेको छ ।
याे पनि पढ्नुस साग क्रिकेटः बङ्लादेशले नेपाल सामु राख्यो १५६ रनको लक्ष
तीन देशबाहेक अन्य देशले स्वर्ण पदक जित्न सकेका छैनन् । बंगलादेश र श्रीलंकाले ३ कास्यपदक जितेको छ ।
भुटान र माल्दिभ्स खाता विहिन छन् ।
ट्याग्स: १३ औं साग, १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद